Tadiavo ny fiantraikany: mamorona resadresaka eran-tany tarihin'ny atiny mitaona aingam-panahy | Martech Zone
Alahady, Martsa 22, 2020 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Douglas Karr
Ny marketing Influencer dia mampifandray marika miaraka amin'ny feon'ireo mpamorona atiny nomerika. Ireo fifandraisana ireo dia miteraka resadresaka tena izy manodidina ny hafatra marika iray, manararaotra ny fanarahan-dàlan'ny mpamorona mahatoky sy ny fidirana manerana ny fantsona media sosialy, sady mitondra fahatsiarovan-tena sy fifamofoana.
Izany dia miteraka fahatsiarovan-tena amin'ny vava ho an'ny demografika kendrenao, mivantana amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy izay andaniany ny fotoanany rehetra. Amin'ny Find Your Influence, izahay dia manampy anao hahita ny feo mety amin'ny marikao ary hamela azy ireo hiasa hanaparitaka ny hafatrao.
Tadiavo ny herinao
The Tadiavo ny herinao (FYI) sehatra marketing marketing influencer dia mamela ny marika hamantatra ny influencers, ny fanentanana fanentanana, ny fanarahana ny zava-bita ary ny valin'ny tatitra. Izy io dia vahaolana amin'ny marketing influencer iray manontolo izay afaka manampy ny PR sy ny pro marketing mba hifandray amin'ireo mpanjifany tsara indrindra amin'ny marika manokana ananany.
Ny sehatr'asan'ny FYI farany dia ahitana ny fahaizany mitady mafy, ao anatin'izany ny taona, ny toerana, ny firosoana, ny fahazoana ara-tsosialy, ny sokajy indostrialy, ny miralenta ary ny foko. Ho fanampin'izany, ny fampivoarana ny sehatra FYI dia mamela ny marika hikaroka ireo influencers amin'ny alàlan'ny teny lakile ao anaty ny atiny. Midika izany fa ny marika dia afaka mitady teny lakile izay mety manokana amin'ny marika sy ny fitaomana azy ao anatin'ny tamba-jotra FYI izay nampiasa ireo teny lakile ireo, na teny mifandraika amin'izany, amin'ny sehatra media sosialy, na ao anatin'ny bilaogin'izy ireo.
Ny fanatsarana naseho tamin'ity kinova ity dia nampahafantarina ny angon-drakitra enin-taona, natambatra tamin'ny hevitry ny mpampiasa, ary tena nampandeha ny fizotran'ny fikarohana influencer. Fantatry ny marika ny karazana influencer sy ny demografika mpanatrika tian'izy ireo kendrena ary nohatsarainay ny fizotrany mba hanesorana ireo fahasarotana rehetra ary hanompo azy ireo haingana.
Cristine Vieira, filoha sady mpiara-manorina ny Find Your Influence
Ary raha be loatra ny ekipam-barotrao na tsy manana traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny influencers, FYI dia manana serivisy tsy voatery ampiharina amin'ny ekipan'izy ireo mpivarotra taloha mba hamono anao. Ary azo antoka ny valiny.
Fandaharam-potoana ny Find Your Influence Demo
Momba ny Find Your Influence (FYI)
Niorina tamin'ny taona 2013, Find Your Influence no vahaolana amin'ny marketing influencer miorina amin'ny SaaS namboarin'ny mpivarotra ho an'ny mpivarotra. Miantehitra amin'ny maro amin'ireo marika ambony manerana an'i Etazonia, ny FYI dia mampiasa teknolojia manan-tompo mba hahitana influencer, fitantanana fampielezan-kevitra ary fandrefesana ny refy. Ao amin'ny tsena nomerika iray mivoatra hatrany, FYI dia mitantana ny fifandraisana amin'ny marika ary mampifangaro azy ireo amin'ireo influencer mety hanome valiny azo antoka. Ny FYI dia manana foibe any Scottsdale, Arizona ary tarihin'ny mpiara-manorina Jamie Reardon sy Cristine Vieira.
Tags: cristine vieiramahita ny influencerstadiavo ny fitaomana anananaoWowny fomba hahitana influencertaonan'ny influencerdemografika mpihaino influencermarketing marketingjamie reardon